Herbal wepụ, Animal wepụ, sweeteners, Plant wepụ Oil - Tong Rui Bio-Tech
Ndozi na Professional, mee ka anyị Life Mma!
Nanjing Tong Rui Bio-Tech Co., Ltd. nke a na-akpọ TRB, anọwo na-elekwasị anya na mgbakwunye eke sitere na afọ 18, TRB bụ ụlọ ọrụ dabere na teknụzụ na-agwakọta R&D, mmepụta na ahịa ahịa mba ụwa. Ngwaahịa TRB gụnyere ihe ọkụkụ, mmịpụta anụmanụ, ihe na -atọ ụtọ, nootropics, ihe ọ juiceụ fruitụ mkpụrụ osisi na ntụ ntụ, mmanụ dị mkpa na mgbakwunye nri. TRB nwere ụlọ nrụpụta abụọ ugbu a, otu bụ ụlọ nrụpụta ihe ọkụkụ sitere n'okike, nke ọzọ bụ ụlọ ọrụ na -emepụta ngwaahịa a beeụ, anyị nwekwara ọtụtụ asambodo dịka ISO9001, ISO22000, HACCP, ORGANICAL, FDA, HALAL, KOSHER.
Green tii wepụ
Gotu Kola wepụ
N'ókèala nke sayensị na nkà na ụzụ
Anyị bụ mgbe na-ebute ụzọ na sayensị na nkà na ụzụ, ifịk ifịk isonye na anụ ụlọ na mba agụmakwụkwọ nzukọ na ụlọ ọrụ technology mgbanwe, na ichepụta mkpa eke wepụ ụkpụrụ. Anyị mepụtara mgbochi ọxịdashọn, aphrodisiac Efrata, sweeteners na nootropics. Anyị na ngwaahịa na-ekpo ọkụ-ere ma na sayensị na nkà na ụzụ n'ókèala na ahịa.
Top R & D ikike
Anyị gbakọtara n'elu R & D ìgwè na akụrụngwa na China. N'otu oge ahụ, anyị natara technical alo na ọrụ site na mkpa European na American oru. Anyị nwere onwe anyị onwe ha laboratories, mepụtara irè n'ọrụ Efrata maka yiri eke extracts, na mepụtara a chọpụtara Series nke nkwekọrịta na monomers.
18 afọ nke mbupụ ahụmahụ, karịrị 200 usoro ngwaahịa, ọtụtụ puku ndị mba njem omume, ihe karịrị mba 40 'ahia ahụmahụ, maara mkpa mba ụkpụrụ, na-enye ndị ahịa na anyị isi ngwaahịa na-ekpo ọkụ na ngwaahịa. N'otu oge ahụ, anyị na-egbo mkpa nke ndị ọzọ na trading ngwaahịa nke ndị ahịa anyị na-enye onye-nkwụsị ngwọta maka Chinese ike na ngwaahịa.
21-09-09 zuru ezu
Ọrịa na-efe efe enweela nnukwu mmetụta ...
21-09-02 zuru ezu
Mkpado ndị metụtara: ahụike obi, chro ...
21-09-01 zuru ezu
Osisi, ihe ndị a na -ahụkarị gburugburu gị ...
21-05-07 zuru ezu
N'oge na -adịbeghị anya, ewepụtara akụkọ data ọhụrụ ...
21-04-19 zuru ezu